प्रचण्डले भने ओलीसहित सबै नेताको स्वदेश विदेशको सम्पत्ति छानबीन गरौं…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर १७, २०७७ बुधबार 9
काठमाडौं : मंगलबार दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूरै समय यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गरेको १९ पृष्ठको प्रस्ताव फिर्ता गर्न निकै कोशिस गरे । उनले पटकपटक उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दिंन, यो सबैभन्दा पहिले नै खा’रेजयोग्य छ, यो छलफलको विषय बन्नै सक्दैन, यसलाई
खु’रुक्क फिर्ता लिन प’र्यो, यो सचिवालयको बैठकमा प्रवेश गर्नै सक्दैन,बरु प्रस्ताव पेश गरेकोमा माफी माग्नुपर्यो भनेर अनेक प्र’यत्न गरे । त्यहिबेला वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भने ‘पार्टीको सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको प्र’स्ताव यहाँ छलफल नगरेर कहाँ गर्ने ? त्यसोभए हामी सबैले भो’मिट (उल्टी) गरौं ! होइन भने सबैले आफ्नो धारणा, बहस, असन्तुष्टि यहिँ पोख्ने हो । कमिटीभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।’
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ‘लिखित होओस् वा मौखि’क छलफल यहिँ (कमिटीमा) गर्नुपर्छ । बरु शिष्ट तवरले गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि त्यहि कुरा राखेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलले भने ‘छलफल गरेपनि त्योभन्दा पहिले सहमति खोज्नुपर्छ’ भन्ने आशय राखेका थिए । उनीहरूले ‘कमिटीभन्दा बाहिरबाट भएपनि पहिले सहमति अनि पछि छलफल गर्नुपर्ने” धा’रणा राखेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले बहुमतको आडमा आफूलाई ङ्याँक्न खोजेको आ’रोप लगाएपछि प्रचण्डले शान्तपूर्वक जवाफ दिए ,‘तपाईं सचिवालयका पाँच जनाको विश्वास जित्न सक्नुहुन्न भने के गर्नुहुन्छ ? एकातिर सचिवालयलाई को’र अफ दि लिड’रसिप भन्ने अनि त्यसभित्रको विश्वास पनि जित्न नसक्ने । मूलतः कोर अफ दि लिडरसिप भनेको कम्यु’निष्ट पार्टीमा स्थायी समिति हो । तर, तपाईं त्यहाँ जान डराउनुहुन्छ । भनेपछि तपाईं कहाँ जाने ?’
प्रचण्डको उक्त भनाईपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पार्टी एकता आफ्नै कारणले सम्भव भएको’ भन्ने पुरानो धार’णालाई दोहो¥र्याएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई वरि’ष्ठ नेता नेपालले ‘यो तपाईंको व्य’क्तिवादी र अहंकाररूपी सोचको उपज हो । एमाले र माओवादीबीच अहिलेको एकताझैँ के त्यसोभए त’त्कालीन माले र मा’र्क्सवादीको एकीकरण केवल मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीबीच मात्र भएको थियो ? अरु कसैको भूमिका र योगदान नै थिएन ? जो नेता छ त्यसको पहल र नेतृत्व हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यसको लागि अरु सबैलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? पा’र्टीहरूबीचको एकता दुई जना नेताको मात्रै एकता होइन, त्यो बुझ्नुपर्यो’ भनेका थिए ।
नेपालले अगाडि भने ‘यो सहमतिको नाममा दुई जना नेताको मात्रै सहमति कहाँको धार’णा हो ? के को सि’द्धान्त हो ? त्यो गलत धा’रणालाई परिवर्तन गर्नुस् । यदि यो बैठकमा दुई जना अध्यक्ष र महासचिव एकातिर र अरु सबै अर्कातिर भएर कुनै नि’र्णय गरियो भनेपनि त्यो निर्णयलाई तीन जनाले मान्नुपर्छ । तपाईंहरू सुपर (महामानव) होइन र सु’प्रिम (सर्वोच्च) पनि होइन । नेकपा दुईजना अध्यक्षको प्राइ’भेट कम्पनी होइन । यी सबै कुरा बुझ्नुहोला ।’
बैठकमा दुईजना नेता मात्र बसेर गरिएको सहमति कदापी सहमति नहुने र त्यो पनि एक किसिमको गु’टबन्दी नै हुने आवाजसमेत उठेको थियो । छलफल र सहमति कमिटीमा र सामुहिकतामा हुनुपर्नेमा धेरै जनाको जोड थियो । मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा गरिएका कतिपय कार्य पनि गु’टबन्दी नै भएको धा’रणासमेत छलफलमा उठाइएको थियो । त्यसैमा प्रधानमन्त्रीले सफाइ दिँदै भने-“खै एनजिओहरुले के-के कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् ।”
केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताको स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति छा’नबीन गरौं !
म भ्र’ष्टाचार गर्दिन र भ्र’ष्टाचार हुन दिन्न” भन्ने मूलम’न्त्र सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री झ’म्टिएपछि प्रचण्डले पनि ‘केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताको स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति छानबीन गरौं’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । ‘तपाईंका मात्र कुरा छन् ? संसारमा भएको सम्पत्ति खोज्ने हो ? दुनियाँले के भन्छ भनेर अलिकति सोच्नु पर्दैन ? पार्टीमा उठाइएका कुराबाट किन डराउनुहुन्छ ?’ प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिप्रश्न थियो ।
ओलीले ‘विगतको सहमतिभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न पाईंदैन’ भन्दै थपे ‘तपाईंले पार्टीको लोगो र नामको दु’रूपयोग गर्नुभयो’। यसैमा प्रचण्डले पनि कडा जवाफ फर्काए ‘त्यसोभए तपाईंले कर्णाली प्रदेश कमि’टीलाई लेखेको पत्र’चाँहि कुन लोगो र के नाममा थियो नि, त्यसमा एक्लौ’टी गर्नुभएको होइन ?’ त्यति नभन्दै ओलीले ‘आफूले महासचिवमा’र्फत् पठाएको’ भन्नासाथ प्रचण्डले ‘त्यसोभए महासचिव तपाईंको मात्रै हो कि मेरो पनि हो ?’ भनेर सोधेका थिए ।
सबैले झ’म्टिन र भुक्न खोज्नुभएको हो ?’ भने ।
पार्टी कार्यालयबाट हिजोको बैठकस्थल बालुवाटार सारिएको सम्बन्धमा पनि कुरो उठेको थियो । बैठकलाई तीन बजेसम्म सार्न प्रधानमन्त्रीले अ’नुरोध गरेपनि अरु सदस्यले नमानेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘खाजा खाएर तीन बजेपछि बैठक राखौं न’ भनेक मात्र थिए एकजना सदस्यले फ्या’ट्ट् ‘बरु खाजा छिटो खानुहोस्,बैठकको समय सर्दैन’ भनेपछि बैठक सुचारु भएको जनआस्थाले लेखेको छ ।
Prev“पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा” : मुलुक समृद्धि र उत्पादनतर्फ अगाडि बढेको छ… हेर्नुहोस्।
Nextपुलको उद्घा’टन गर्न तनहुँ पुगेका वरिष्ठ नेता पौडेल प्र’हरीको निय’न्त्रणमा ! कारण छ यस्तो भिडियो सहित हेर्नुहोस् ।